Boycott လုပ်ရမယ့်အစား ဆိုင်ကိုပါကြော်ငြာပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တခုကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ အပြင်းအထန် ဝေဖန်တာခံနေရတဲ့နန်းစုရတီစိုး.. - ပညာ ပါဝါ
admin . admin | 26/03/2022 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်တွေချစ်ခင်အားပေးရတဲ့အဆိုတော်နန်းစုရတီစိုးကတော့အသံချိုချိုလေးနဲ့သီချင်းတွေကိုသီဆိုတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။နန်းစုကတော့ကပြားမလေးဖြစ်ပြီးဖြူဖြူဖွေးဖွေးနဲ့အရပ်ရှည်ပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတာကြောင့်ပုရိသတွေအားပေးမှုလည်းရရှိနေတာပါ။ သူမကတော့အင်တာဗျုးတွေမေးတိုင်းမှာလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးလေးတွေနဲ့ ဖြေဆိုတတ်သူဖြစ်တာကြောင့် အားလုံးကချစ်ခင်နေရသူလေးဖြစ်ပါတယ်။
သူမကသီချင်းတွေဆိုတတ်ရုံမကဘဲ မြန်မာဇာတ်လမ်းတွေမှာလည်း ကျရာနေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်…နန်းစုကတော့ကိုယ်ပိုင်အမ်ဘမ်တွေလည်းထွက်ရှိထားပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တစ်လောက်မှာတော့ သူမက အချစ်ရေးနဲ့ပက်သက်လို့တော့ သိုသိပ်နေပါတယ်နော်.. ဒါပေမဲ့တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေကိုတော့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ ဖြစ်ဖြစ်
Instagram မှာပဲဖြစ်ဖြစ် တင်ပေးလာတတ်ပါတယ်နော်.. ဒီနေ့လေးမှာတော့ နန်းစုက စိန်နန်းတော် စိန်ဆိုင်လေးကို ကြော်ငြာရိုက်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်…
ပြည်သူပရိသတ်တွေကတော့စိန်နန်းတော်က ပြည်သူတွေကို ဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ ဒေါ်သက်သက်ခိုင်ရဲ့ဆိုင်ကို ကြော်ငြာပေးတာကြောင့် ဝိုင်းပြီးဝေဖန်နေတဲ့ ကောမန့်တွေနဲ့ ရေးသားနေကြပါတယ်နော်. ပရိသတ်ကြီးလည်း နန်းစုကို တစ်ခုခုရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်..
Source: Nan-Sa- Yati Soe
ပရိသတ္ေတြခ်စ္ခင္အားေပးရတဲ့အဆိုေတာ္နန္းစုရတီစိုးကေတာ့အသံခ်ိဳခ်ိဳေလးနဲ႔သီခ်င္းေတြကိုသီဆိုတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ။နန္းစုကေတာ့ကျပားမေလးျဖစ္ၿပီးျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးနဲ႔အရပ္ရွည္ၿပီးခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတာေၾကာင့္ပုရိသေတြအားေပးမႈလည္းရရွိေနတာပါ။ သူမကေတာ့အင္တာဗ်ဳးေတြေမးတိုင္းမွာလည္း ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့အၿပဳံးေလးေတြနဲ႔ ေျဖဆိုတတ္သူျဖစ္တာေၾကာင့္ အားလုံးကခ်စ္ခင္ေနရသူေလးျဖစ္ပါတယ္။
သူမကသီခ်င္းေတြဆိုတတ္႐ုံမကဘဲ ျမန္မာဇာတ္လမ္းေတြမွာလည္း က်ရာေနရာကေန ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…နန္းစုကေတာ့ကိုယ္ပိုင္အမ္ဘမ္ေတြလည္းထြက္ရွိထားၿပီးေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တစ္ေလာက္မွာေတာ့ သူမက အခ်စ္ေရးနဲ႔ပက္သက္လို႔ေတာ့ သိုသိပ္ေနပါတယ္ေနာ္.. ဒါေပမဲ့တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ ခ်စ္သူရဲ႕ ဂ႐ုစိုက္မႈေလးေတြကိုေတာ့ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွာ ျဖစ္ျဖစ္
Instagram မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ တင္ေပးလာတတ္ပါတယ္ေနာ္.. ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ နန္းစုက စိန္နန္းေတာ္ စိန္ဆိုင္ေလးကို ေၾကာ္ျငာ႐ိုက္ေပးေနတဲ့ဗီဒီယိုေလးကို တင္ေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…
ျပည္သူပရိသတ္ေတြကေတာ့စိန္နန္းေတာ္က ျပည္သူေတြကို ဂုတ္ေသြးစုတ္ေနတဲ့ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ရဲ႕ဆိုင္ကို ေၾကာ္ျငာေပးတာေၾကာင့္ ဝိုင္းၿပီးေဝဖန္ေနတဲ့ ေကာမန႔္ေတြနဲ႔ ေရးသားေနၾကပါတယ္ေနာ္. ပရိသတ္ႀကီးလည္း နန္းစုကို တစ္ခုခုေရးေပးသြားၾကပါအုံးေနာ္..
အနုပညာအလုပ်တွေနားထားရတုန်းရှိတာလေး ထိုင်စားတာကုန်သွားပြီမို့ဝမ်းရေးအတွက် တက်စီလေးထွက်မောင်းနေတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဇာတ်ပို့အောင်ဇော်မင်း…
လူတွေ သိပ်မမြင်ဖူးကြသေးတဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မင်းမော်ကွန်းရဲ့ ငယ်ဘဝအမှတ်တရပုံရိပ်လေးများ..